Fampidirana FRAM-“EZAHINA TSY HISY KOLIKOLY” -
AccueilLa UneFampidirana FRAM-“EZAHINA TSY HISY KOLIKOLY”
05/01/2017 hasina La Une, Sosialy 0
Mitohy amin’ity taona 2017 ity ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram andiany fahefatra. Mandritra ny volana Janoary no hanangonana ireo isa avy any amin’ny CISCO tsirairay manerana ny Nosy handrafetana ny lisitr’ireo mpiasam-panjakana vaovao ireo ka tokony efa eo am-pelatanan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izany ny volana Febroary ho avy izao. Nasiana fanatsarana mantsy ny fomba handraisana azy ireo ka tsy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena intsony no hanolotra ireo mpampianatra ilain’ny isaka ny CISCO fa hiainga amin’ny filàn’ity farany izany ka izy no hanolotra ireo mpampianatra ireo. Ho atao laharam-pahamehana ihany koa ny fandraisana ireo ambiny tsy voaray nandritra ny andiany fahatelo. Mety ho maro tsy tahaka ny tamin’ireo andiany teo aloha araka ny isan’ireo horaisina ho mpiasam-panjakana amin’ity andiany manaraka ity.
Ny volana Aprily farafahatarany no hivoaka amin’ny fomba ofisialy ny lisitra farany ka ampahibemaso no hanehoana izany hialana amin’ny ahiahy sy ny kolikoly. Mbola mahatratra hatramin’ny efatra alina any amin’izao fotoana izao ireo mpampianatra Fram mahafeno fepetra saingy mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana. Ireo izay nandray ny asany sy nahafeno ny antontan-taratasy talohan’ny taona 2014 no voakasika amin’ity andiany fahefatra ity raha ny nambaran’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Rabary Paul “ezahina tsy hisy kolikoly ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram andiany manaraka. Hojerena ny lisitry ny andiany fahatelo dia hoesorina ao anaty lisitra ireo izay efa voaray ho mpiasam-panjakana dia ho voaray ho azy ny ambiny…mety ahazo bebe kokoa ireo faritra izay mila izany amin’ity andiany ity” hoy ihany izy nanamafy. Ho hentitra ny tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ka tsy ekena ireo antontan-taratsy rehetra tsy ampy na tsy manaraka ny fepetra ary eny anivon’ny CISCO izany dia tsy handeha intsony.
Miaiky ny tompon’andraikitra fa nisy ny lesoka nandritra ireo andiany telo voalohany ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo saingy karohina ny fomba hanarenana izany amin’ity andiany manaraka ity.